2017 #NABShow XCHARX Day2Wrap-up XCHARX NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » 2017 #NABShow - နေ့2အသုတ်စုံ
2017 #NABShow - နေ့2အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2017 ၏ဒုတိယနေ့ NAB ပြရန် - ငါအဘယ်သို့ဆိုနိုင်သလဲ ထုတ်လွှင့် Beat မနေ့ကပြရန်တစ်ခုထူးချွန်လွှမ်းခြုံနေ့ကရှိခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့ယနေ့ပင်ပိုကြီးနှင့်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်သွားရဲ့! အဆိုပါ BB န်ထမ်းဖွယ်ရှိနေသည်ခဲ့ - ကိုပြရန်ထိုပေါ်လာသောအပေါငျးတို့သထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းထဲကစကားလုံးအရခွင့်ပြုအတွက်အလွန်ဆာပ!
ဤတွင်ငါတို့ - နေ့2များအတွက်အဆင်သင့်ဆိုတော့ - လူတိုင်းမျက်လုံး-တောက်ပနှင့် Bushi-tailed ဖြစ်ပါတယ် ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမားတွေ In-check လုပ်ထားကြပြီးကျွန်တော်လှိမ့်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ, ဒါဟာ Las Vegas မှာနီဗားဒါးအတွက်ဤနေရာတွင်အခြားလှပသောနေ့ကဖွင့်ခြင်းနှင့်ငါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုကအမိန့်ထုတ်ကြောင်းဝမ်းသာတယ်!
တစ်ဦး 4K ကင်မရာနဲ့အတူ PowerVision PowerEgg မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ချိန်ညှိကိတ်မုန့်တဖဲ့ကိုရခြင်းပါ! အဆိုပါ၏ဤချောမွေ့ပြောင်လက်မျက်စိ လေလှိုင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်သွေးထွက်အစွန်းအင်ဂျင်နီယာရှိပါတယ်, နှင့်လည်းကြော့နှင့်ဗေဒသဘောဆောငျတဲ့အစွမ်းထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကင်မရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက် box ကိုထဲက - ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ပထမဦးဆုံး Maestro အမူအရာအခြေစိုက် Controller ကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ပြုလုပ်ရောနှောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အရင်ကဆိုရင်ဘို့ပျံသန်းဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ Maestro သင်ကောင်းကင်ပြာအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏တည်နေရာလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြု, အစစ်အမှန်အချိန်၌သင်တို့၏လက်မောင်းလှုပ်ရှားမှုများအနက်ဖွင့်။ ဒါဟာတစ်ဗဟိုအချက်တဝိုက်လှည့်ပတ်နေတဲ့ Pre-set လေယာဉ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာသို့မဟုတ် "အတိုင်းလိုက်နာ-ငါ့ကို" mode မှာ, တိကျသောအမြန်နှုန်းနှင့်အကွာအဝေးနှင့်အတူအသုံးပြုသူအောက်ပါအတိုင်းနိုင်ပါတယ်။ (23 mAh ဘက်ထရီ၎င်း၏မတ်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ပေါ် အခြေခံ. ) 6400 မိနစ်အများဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်နှင့်အတူ, သင်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမှမကောင်းတစ်ခုသောအဘို့ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်! တစ်ခုအံ့သြဖွယ်စက်ကိရိယာနှင့် ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်နည်းပညာ!
မာဂွန် Leiper ikancorp 's သစ်ကို NiSi filter များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ အားလုံး ikancorp ထုတ်ကုန်မြင့်အရည်အသွေးဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးထက်သာလွန်အနေအထား၌မိမိတို့ပြုသောပူဇော်သက္ကာနေရာကြောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆံ့! ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ရဲ့သဘာဝည (FilterNIP-100-NGT) အလင်းညစ်ညမ်းမှု၏အသုံးအများဆုံးလှိုင်းအလျားပိတ်ဆို့ဖို့အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောပြဒါးငွေ့, ဆိုဒီယမ်နှင့်အနိမ့် CRI အဖြစ်ညဉ့်ကောင်းကင်ပြာညစ်ညူးစေကြောင်းအလငျး၏များစွာသောမလိုလားအပ်သောလှိုင်းအလျား streetlights LED ပါဝင်သည်။ NiSi အားဖြင့်သဘာဝည Filter ကိုကို double-တဖက်သတ် Anti-တောက်ပအပေါ်ယံပိုင်းရှိပါတယ်တဲ့ 2mm H-K9L မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျ optical ဖန် filter ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ဒီနေ့ရဲ့အစွန်းရောက်မြင့်မားသော-megapixel ကင်မရာအဘို့အပြတ်သားသေချာစေရန်ထုမြေပြင်နှင့်ပွတ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ် Accardi, သမ္မတ CueScript သူတို့ရဲ့အံ့သြစရာ teleprompters နှင့်အချို့နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးပွဲ အံ့သြဖွယ်အမြန်နှုန်းနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သား။ အဆိုပါ CueScript teleprompter အကွာအဝေးလိမ္မာပါးနပ်နှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူ, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာမှုစတိုင်နှင့်လက်တွေ့ရောက်ပြီး။ feature ကြွယ်ဝဖို့စတိုင်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းများအဲဒီမှာကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်မသာ, CueScript အားလုံးသင့်ရဲ့ချက်ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အကုန်သည်တွေတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွန်ယက်ကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုဥပမာဖြစ်ပျက်, ဒါကြောင့်သူတို့ကဆိုသည်ထက်, ထင်ရသောပိုမိုလွယ်ကူပြုမိအစားထိုးဖန် purchasing စေ! CueScript prompter မော်နီတာလွယ်ကူသော Set-up များအတွက် mounting ပေါင်းစည်းပါဝင်သည်။ သူတို့ကအကောင်းကြည့်ပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့နှင့်တာရှည်ခံမသာတဲ့ကြော့မော့သောအနိမ့်ပရိုဖိုင်းကိုဒီဇိုင်းရှိသည်။
ကျနော်တို့ရပ်တန့်ဖြင့်ဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယိုမှာဆမ် Coupe, VP ဒစ်ဂျစ်တယ်စစ်ဆင်ရေး & လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ chat ရန်။ ဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယို Lorne မိုက်ကယ်ကတည်ထောင်မယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေးနှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နယူးယောက်မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင် Brill အဆောက်အအုံအတွက် 1979 အတွက်ဖြန့်ချိ, Broadway မှဗီဒီယိုတိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်မူရင်းဟာသအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေသည့်လွတ်လပ်သောစတူဒီယိုသို့လာခဲ့သည်။ သင်သည်သူတို့၏ရှိုးပွဲကိုမြင်ရပါတယ် - သူတို့စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်, ဂျင်မီ Fallon, 30 ရော့ခ်နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသူများနှင့်အဆိုပါယနေ့ညပြရန်ကဲ့သို့သောပွဲများနောက်ကွယ်မှနေပါပြီ! သူတို့က Tommy Boy နှင့်ဝိန်းကမ္ဘာ့ဖလားကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေကုန်အမှတ်တံဆိပ် & ဖန်တီးမှုဌာနခွဲ, ကမ်းလှမ်းမှုကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများနှင့်ပင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးရှိသည်! ထို့အပြင်အစောပိုင်း, သူတို့ရဲ့ဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယို Ventures အပိုင်းပစ်မှတ်များနှင့်ကြီးထွား-ဇာတ်စင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ, ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ, မိတ်ဖက်များနှင့်မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာကဏ္ဍများတွင်ဖြတ်ပြီးဖက်စပ်။
Jaimi နှင့်ဒါဝိဒ်အလက်ဇန်းဒါး, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူများအတွက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ, ထုတ်ကုန်အချို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပွဲ မှာ featured NAB ပြရန်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူသူတို့ရဲ့အလုပ်နှင့်အလုပ်စတိုင်သက်ဆိုင်မယ့်တစ်ဦးလမ်းအတွက် software များနှင့်အတူန်ထမ်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကဖန်တီးသောပလက်ဖောင်း QuickHelpTM, နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပို့ခြင်းအားဖြင့်, သူတို့ကပိုပြန်လာမယ့်အသုံးပြုသူများကိုစောင့်ရှောက်။ န်ထမ်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးပိုမိုလျင်မြန်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုအဘို့, အသုံးပြုသူများကိုအလုပ်ခေါင်းစဉ်, အလုပ်စတိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့သင်ယူမှုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် personalize သိုတစ်ဦးအမြန်စားသုံးမှုစစ်တမ်းယူခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ စစ်တမ်းတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အသုံးပြုသူအပြုအမူအပေါ်အခြေခံပြီး custom ကျွမ်းကျင်မှု Paths ကလူပိုကောင်းယခင်ကထက်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပျကိုကူညီသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူ။ သုံးစွဲသူများအုပ်စုများ join တံဆိပ်များဝင်ငွေ, သူတို့သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၌ထရွှေ့အဖြစ်သူတို့သင်ယူသောအရာကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူ Josef Rabinovitz, JMR နှင့် Jaimi JMR ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်နှင့်အကြီးမားဆုံးသောအဆိုပါ Show မှာအချို့ဆွေးနွေးပါ။ 1982 ကတည်းကထူးချွန်ဖို့ JMR ရဲ့ကတိကဝတ်သူတို့ကိုအဆင့်မြင့်သိုလှောင်ရေးကိရိယာအတွက်ရွှေစံထုတ်လုပ်များအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ USA တွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်, JMR ဟာ့ဒ်ဝဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမီဒီယာပညာရှင်များ, အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများကအပေါ်သို့မှီခိုနေပါတယ်။ ၎င်းတို့၏အလုပ်အကြောင်းကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်သူကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အယ်ဒီတာများအဘို့, JMR သင်အကြီးစားသိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်အတူ ultrafast ဖိုင်လွှဲပြောင်းကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအကျိုးရှိစွာလုပ်ငန်းအသွားအလာ setup ကိုတည်ဆောက်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော BlueStor သိုလှောင်မှုစနစ်များအဖြစ် JMR-မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန် JMR NAS server ကိုအဖြစ် Thunderbolt2(JMR Lightning) နည်းပညာ-တပ်ဆင်ထား devices တွေကိုလုံခြုံသင့်ရဲ့ဒေတာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုနှင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုး။
NUGEN အသံနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာပေါလုသည် Tapper, သူတို့ရဲ့ဆုရပတ်လည်ဆော့ဖျဝဲအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲ Halo Downmix - မရှိတော့ပုံမှန် in-the-box ကိုကိန်း-based ဖြစ်စဉ်များမှကန့်သတ်ဖြစ်ကြောင်းတိကျ downmixes ပို့အသစ်တစ်ခုဖြေရှင်းချက်။ ဒါဟာမကြုံစဖူးညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ခွင့်ပြုနှင့်ဆွေမျိုးအဆင့်ဆင့်, အချိန်ကိုက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သံကိုချိန်ခွင်လျှာ vs. တိုက်ရိုက်များအတွက်အမြင်ထိန်းချုပ်မှုပေးပါသည်။ ပေးတဲ့ dialog အဆင့်ကိုနောက်ဘက်လိုင်းများအနေဖြင့် Phantom စင်တာအချိုးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုလျှံပတ်ဝန်းကျင်အသံနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲနိမ့်ကြိမ်နှုန်းကိုလည်း downmix အတွက်သင့်လျော်တဲ့အဆင့်ကိုသေချာစေရန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရနိုင်ပြီး, အမွေ upmix အလေ့အကျင့်အားဖြင့်မိတ်ဆက်ပတ်လည်လိုင်းများအတွက်အခြိနျဇယားအပိုငျးအယခုမသာ တစ်ခုခုကိုကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ် Halo Downmix အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, fix ရန်လွယ်ကူ။ တီးဝိုင်းကိုနားထောင်!
Outsight Pty Ltd မှ Tama Berkeljon သူတို့ရဲ့ဘက်ထရီ-powered နဲ့ LED မီးလုံးချွတ်ပြသထားတယ်။ သူတို့ကတောင်ပိုရှည် Ni-MH သို့မဟုတ် Li-Ion နည်းပညာများနှင့်အတူတစ်ဦးကျိုးနွံအရွယ်ဘက်ထရီအနေဖြင့်တဦးတည်းကိုကျော်နာရီလည်ပတ်ရ, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများ exacting နှင့်အတူ coupled Outsight ရှေ့ဆောင်တွေစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နှင့်၎င်းတို့၏လျင်မြန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူသစ်ကိုဖြေရှင်းချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များတည်ဆောက်, အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးတိုးတက်သောကုမ္ပဏီအချို့နှင့်အဆက်အသွယ်သို့သူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ 2004 မှာတော့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကြီးတွေစီမံကိန်းကိုသူတို့ကို 60 လ်တာရွေ့လျားမှုဖမ်းဘို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့ LED အလင်း၏ 6kW ပေးနှင့်အတူဒါရိုက်တာဂျော့ခ်ျ Miller ကယ့်မင်္ဂလာခြေများ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုပထမဦးဆုံးအကြီးစား High-ပါဝါ LED တပ်ဆင်၏တဦးတည်းဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ခဲ့ ။
ဒန် Miall, CEO ဖြစ်သူ BirdDog ဂီယာတစ်ခု NDI IP ကို ​​signal ကိုဗီဒီယို converting ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဇာတ်ဆောင်အင်ဂျင်နီယာများ, သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် - ကြီးမြတ်စျေးနှုန်းများမှာကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်စေ။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့သော NDI အဖြစ်အိုင်ပီ Workflows မှ baseband ဗီဒီယိုမှအကူးအပြောင်း simplifying ထံအပ်နှံကြသည်။ သူတို့ရဲ့ BirdDog စတူဒီယို တိုက်ရိုက်လွှဘဏ်ဍာအသစ်တစ်ခုအိုင်ပီလုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ထည့်သွင်းခံရဖို့တည်ဆဲကင်မရာများနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ပြောင်းလဲ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုချီးမြှင့်ကြသည်။ အခါမဆိုကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု, သင့်ခလုတ်သို့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုက input ကိုဖြစ်လာ HDMI သို့မဟုတ် SDI signal ကိုတစ်ဦး IP ကို ​​signal ကိုမှအသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုပျော့ပျောင်းသည်ဗီဒီယိုသွင်းအားစုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုသို့ (NDI သဟဇာတ device ကိုလိုအပ်ပါသည်) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစတူဒီယိုတင်ဆက်ထားပါတယ်, BeTerrific နှင့်အတူ teaming အကြောင်းကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ Chris ပယ်ရီ, ကုန်ပစ္စည်း Manager ဖြင့် LiveU မှာ Jaimi ။ BeTerrific ဧည့်သည်များကကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုအမှုထမ်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအများကြီးမပါဘဲ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုက်ရိုက်စတူဒီယိုကို set up ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတွေ့မြင်ကိုကူညီမယ့််ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Show မှာ, LiveU က၎င်း၏အသစ်ကမျိုးစပ်မိတ်ဆက် ဂြိုဟ်တု နှင့်ဆယ်လူလာ HD ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုထိန်သိမ်း-တပ်ဆင်ထားထုတ်ကုန်သို့၎င်း၏ Ultra-သေးငယ်တဲ့ LU200e uplink ယူနစ်ပြောင်းလဲ။ LiveU ရဲ့သက်သေပြချက် Bond နည်းပညာပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်း, LU210 နှင့် LU220 ဖြေရှင်းချက်သတင်းအသင်းများကိုပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြု ဂြိုဟ်တု နှင့်-ပြောင်းရွှေ့-ပေါ်နှင့် fixed နေရာများတွင် newsgathering ဘို့ဆယ်လူလာကွန်ရက်များ။ LiveU, အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးကားမောင်းတီဗီများအတွက် streaming တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုပေး, မိုဘိုင်း, အွန်လိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာသည်။
မဿဲ Goldman, SMPTEconnect သမ္မတအသစ်ပြောသွား SMPTE IP ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ။ SMPTE အဖွဲ့ဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 65 ကျော်နိုင်ငံများတွင်တည်ရှိ; SMPTE သူ့ဟာသူရုပ်ရှင်, တီဗီ, ဗီဒီယိုအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အသော authoritative အလေ့အကျင့်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည် မာလ်တီမီဒီယာ။ 200 ကျော် (အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ) အဖွဲ့ဝင်များတည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ပိုင် SMPTE, စိမျးထွက်ပင်အသေးဆုံးမီဒီယာပုံရိပ်နယ်ပယ်ရောက်ရှိဖို့သကဲ့သို့။ အခုတော့တိုင်းစည်းကမ်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်, အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာကွန်ယက်, compression encryption ကိုများနှင့်အခြားသောလယ်အလုပ်သမားပုံရိပ်တွေအတွက်အင်ဂျင်နီယာများ, နည်းပညာဒါရိုက်တာများ, cameramen, အယ်ဒီတာများ, ပညာရှင်များ, ထုတ်လုပ်သူများ, ဒီဇိုင်နာများ, ဆရာ, ဆရာမများ, အတိုင်ပင်ခံနှင့်လယ်ပြင်သည်အသုံးပြုသူများပါဝင်သည်။ သူတို့ကအသုံးဝင်အပြန်အလှန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်အားပေးရာ၎င်းတို့၏မကြာခဏနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်တဦးတည်းခြေလှမ်းရှေ့နည်းပညာများနေဖို့။
ဘော့ Boster, ClearCom သမ္မတ, သူတို့ရဲ့အသစ်ကအေးဂျင့်-IC ထုတ်ကုန်တစ်ကြိမ်မှာအော်ဒီယိုချန်နယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံကိုရှင်းပြသည်။ အေးဂျင့်-IC Eclipse-HX iOS နှင့် Android ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာအပြည့်အဝ-featured မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူဘူတာရုံရှိခြင်း၏ option ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့ဖို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ App ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအေးဂျင့်-ICClient ရဲ့ access ကိုပု Eclipse HX EHX Software များအတွင်းဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုထိန်းချုပ်ရေးကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အ Eclipse-HX နှင့်အတူလုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိက interface ကိုများအတွက်အသုံးပြုသူရဲ့ login နဲ့ audio encryption ကိုထောက်ခံပါတယ်။ အေးဂျင့်-IC တဦးတည်း-to-တဦးတည်း, One-to-အများအပြား, partyline, ISO နှငျ့ IFB ဆက်သွယ်ရေးထောက်ခံပါတယ်။ ဒီ app ကိုလည်းဒေသခံ Cross-အမှတ်အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်အကြောင်းကြားစာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ခံပါတယ်။
တိုနီ Trent, အထွေထွေမန်နေဂျာမှာ Atomos, ကော်ဖီနှင့်ချတ်-up, သူတို့ရဲ့အသစ်အ HDR ကိုဆူမိုနပန်းရုပ်ရှင်ရုံရှိပါတယ် Display ရဲ့။ တစ်ဦး 19 "HDR 1200nit 10 + 4K 12bit ကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ် 10bit 422 ProRes / DNxHR အသံဖမ်းနှင့်အတူ panel ကိုရပ်တန့်ပေါင်းစပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်မှု / စတူဒီယိုမော်နီတာဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်နှင့် HD 240p သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ switching လေးယောက် 1080p60 လိုင်းများ၏အသံဖမ်းအထိမှတ်တမ်းတင်, Atomos , မှတ်တမ်းတင်ခြင်း switching နှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း, စစ်မှန်သောတော်လှန်ရေးအတွက်လုံးဝထုတ်လုပ်မှုမော်နီတာအစုံပေါ်နှင့်စတူဒီယိုအတွက်မည်သို့အသုံးချမည်ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်များ၏ထို့အပြင်မှတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြုတ်ချခဲ့သည်။ ဒါဟာလယ်ပြင်၌လက်ပ်တော့များအတွက်အဆင့်နှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းမော်နီတာအဖြစ် HDR ကိုအရည်အသွေးနှင့် Doubles တှငျမှတျတမျးတငျထားသ content တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားချက်ချင်းလက်လှမ်းအပေါ် client နှင့်သင်္ဘောသားပေးသည်။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ switching နှင့်အသံဖမ်းနောက်တဖန်အခြားရှုထောင်ဖြစ်ပါသည်လေး 1080 / 60p လိုင်းများအကြား switch ကိုအသကျရှငျဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြည့်စွက်, စံချိန်4က ISO လိုင်းများ x နှင့် cueing, လက်ဝါးကပ်တိုင်မှိန်နဲ့ Hard ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူပြည့်စုံတိုက်ရိုက်စံချိန်ရောမွှေပါ။
ရိုင်ယန်ရုံ (နှစ်ခုသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲ၏ Winner "။ က Man အဆိုပါအမြင့် Castle မှာတော့" အမေဇုံချုပ်ရဲ့သရုပ်ဆောင်ယောလ de la Fuentes နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဒံယလေသ Percival အင်တာဗျူးနှင့် Ridley Scott ကထုတ်လုပ်ဖိလိပ္ပုကေဒစ်ခ်ရဲ့ဆုရဝတ္ထု (နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အပေါ်အခြေခံပြီးBlade ကို Runner) နှင့်ဖရန့် Spotnitz (X-Files)), အမြင့်မားသောရဲတိုက်၌က Man မဟာမိတ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆုံးရှုံးခဲ့များနှင့်ဂျပန်နှင့်ဂျာမဏီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့စူးစမ်း။ ရုဖု Sewell (ယောဟန်ဒမ်), လုကာ Kleintank (Pretty Little က Liars), နှင့် Alexa Davalos (လူဆိုးဂိုဏ်းစီးတီး) Starring ။
Drago Flores ထံမှ Shotoku တရားဝင်သူတို့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သစ်ကို Graphica ရိန်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ အဆိုပါ Graphica စီးရီးထိပ်တန်း၏ Fusion ကိုဖြစ်ပါတယ် Shotoku VR နည်းပညာနှင့်ဂုဏ်သတင်းရိန်းထုတ်လုပ်သူ CamMate ၏အင်ဂျင်နီယာ Know-ဘယ်လောက်။ , ခရီးဆောင်အရွယ်မှာ, တည်ငြိမ်ပြီး, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ပြန်လုပ်ပါသောအထုပ်ထဲမှာစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ခြေရာခံခြင်းစွမ်းရည်နှင့်အတူကင်မရာရိန်းခြေရာခံရလဒ်ကို manual ကို virtual / လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် (VR / AR) ၏အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ Graphica အထူးသ VR application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ embedded ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ rotary ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများထံမှ positional ဒေတာ output ကိုတွက်ချက်။ မကြာခဏသည်အခြား positional ခြေရာခံခြင်းစနစ်များနှင့်အတူဆက်စပ် Jitter, ပြင်ပအမှတ်အသားများနှင့်ဧရိယာကိုကန့်သတ်အခမဲ့, Shotoku ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများချောမွေ့စွာစတူဒီယိုအတွက်သို့မဟုတ်တည်နေရာပေါ်, Real-time data ကို output ကိုပေးဖို့ SPI interface မှတစ်ဆင့်ဒေတာကို process ။
Shadath Shahid, Canare မှာအင်ဂျင်နီယာမန်နေဂျာသူတို့ရဲ့သစ်ကို 12G SDI cable ကိုချွတ်ပြသထားတယ်။ Canare , ဖွံ့ဖြိုးထုတ်လုပ်လျက်, အကောင်းဆုံးအသံနှင့်ဗီဒီယိုကြိုးတွေ, connectors, patchbays, နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးက / V ကိုစျေးကွက်အတွက် fiber-optic ထုတ်ကုန်ပေးပါသည်။ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများ, အသံပညာရှင်များ, A / V ကိုစက်ရုံပေါင်းစည်း, ဒီဇိုင်းအတိုင်ပင်ခံနှင့်များစွာသောဦးဆောင် OEM ရဲ့ Canare ရဲ့ထုတ်ကုန်, သက်သေယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ထိပ်တန်းထစ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အားကိုး။ 1974 ကတည်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ, သူတို့ကအသံဗီဒီယိုကြိုးတွေ, connectors, အသင်းတော်များ, converters အဖြစ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
Jannette အားလုံးနစ်ခ် Mattingly ထံမှ Switcher ကိုစတူဒီယို, ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူသည်။ switcher စတူဒီယိုအခြားသူများပိုမိုလွယ်ကူစျေးသက်သာခြင်းနှင့်ပိုမြန်ကြီးအဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ကူညီရန်အိပ်မက်နှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုအပြစ်တွေခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ပိုကောင်းတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုလုပ်ကိုကူညီရနျကြှနျုပျတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ switcher စတူဒီယိုပိုကောင်းဗီဒီယိုမြန်လွယ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစီးဆင်းစေရန်ဖန်တီးသူအာဏာ။ ပစ္စည်းကိရိယာများပြီးသားပိုင်ဆိုင်သောကာလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု interface ကိုနှင့်အတူအလွယ်တကူဂရပ်ဖစ်များနှင့် Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုကင်မရာများကနေအကူးအပြောင်း။ ဆိုလိုသည်မှာကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးယခုတစ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းနှင့်ထောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းမျှဝေကြီးထွားရန်အဘို့အတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Switcher ကိုစတူဒီယိုအဖွဲ့သည်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းဖြစ်နေဆဲမိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များကလိုအပ်သောအရာကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်မည်သို့တိုးတက်စေ-they're ဖို့အမြဲဒီနေရာမှာကူညီရန်ရှိရာကဤနေရာတွင်ပါပဲ။ အခြေခံအဘို့အနည်ထိုင်မနေပါနဲ့ - Switcher ကိုစတူဒီယိုနဲ့အတူပိုပြီးလုပ်ပါ။
ကျနော်တို့ Janette ဂျေဆန် Friedlander, Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်အဘယ်မှာရှိ Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများမှာရှိပါတယ်။ သူတို့တရားဝင် IBC အမ်စတာဒမ် 2016 မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်လွှဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော်လည်း, နေ့စွဲ, သူတို့တိုက်ရိုက်လွှဖြေရှင်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာဦးဆောင်အားကစားထုတ်လွှင့်မှုအတွက် 25,000 အဓိကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကနာရီသန်းပေါင်းများစွာထုတ်လွှင့်ပါတယ်နှင့်သန်း 10 ကျော်တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်ရှုရန်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များစကေးနှင့် 20,000 ကြည့်ရှုနေတဲ့စက္ကန့်စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါ။ ဒါဟာကြည့်ရှုသည် screen ပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်ချောမွေ့စွာ, တီဗီကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ် Workflows ရိုးရှင်းဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောအပြည့်အဝပေါင်းစည်းဖြေရှင်းချက်ပဲ! တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုပုံစံကိုလိုက်နာပါ။ VOD မတူဘဲတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များပရိသတ်ကို internationally.The ပလက်ဖောင်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအများစုချိတ်ဆက်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ငါးတိုက်ကြီးအပေါ်ရှိနေခြင်း၏ 100 ကျော်အချက်များရှိပြီးသေချာနေသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ပင်, ကွန်ရက်များဒေသအလိုက်အသွားအလာ spikes တွေ့ကြုံခံစားစေ, လောင်မီးများကဲ့သို့ကြီးထွားနိုင်ပါတယ် ဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာက high-quality ကြည့်, အချိန်မရွေး, ။
၏နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူစကားပြော Jaimi RUSHWORKS.tvမှာမိတ်ဆက်ပြသထားကြောင်းဘာအကြောင်းကို, Rush Beesley သူတို့ရဲ့တဲယနေ့! အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် ON သည်သော့ပိတ်ထားသည့် RFID- ခြေရာခံခြင်းစနစ်အထွက်စစ်ဆေး - အနုပညာရှင်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏-အဆင်သင့်နှင့်ရောနှောနေတဲ့ခြေရာခံသည့်စနစ်။ ON သည်သော့ပိတ်ထားထိန်းချုပ်ထားသည့်အရာဝတ္ထုခြေရာခံခြင်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် သင့်ရဲ့သုံးပြီးတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို PTZ ကင်မရာများသို့မဟုတ် PTX လ်တာ အကြိုက်ဆုံးကင်မရာ။ ဒါဟာ RFID tag များနှင့်ကျောက်ဆူးကိုအသုံးပြုသည်, ကင်မရာကိုအလိုအလျောက်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နောက်သို့လိုက်ရန်ခွင့်ပြု မျိုးစုံသုံးရှုထောင်အာကာသအတွင်းပစ်မှတ်ကိုပြောင်းရွှေ့။ ON သည်သော့ပိတ်ထားစွမ်းအင်သုံးတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံဘက်ထရီကနေ positioning ကိုဒေတာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ က transmitter (တဂ်) မျိုးစုံ RFID အသံဖမ်းရန် positioning ကိုဒေတာပေးပို့ခြင်း (Anchor) အာကာသ၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာန်းကျင်နေရာချ. အဆိုပါနည်းပညာ၏ကင်မရာအလုပ်အတုယူဖို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ရွေ့လျားမှုနှင့်အရှိန် / deceleration data တွေကိုအသုံးချ ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကင်မရာအော်ပရေတာ။ သင်တစ်ဦးတရားဟောဆရာတစ်ဦးပါမောက္ခတစ်တင်ဆက်သူ, ဒါမှမဟုတ်နောက်ကိုလိုက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းရှိမရှိ လိုလားတဲ့အားကစားသမားများ, ON ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့် ISO မှတ်တမ်းတင်စွမ်းရည်၏တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအတိုင်းအတာကိုထောက်ပံ့ပေးသော့ခတ်လေ၏။
ဒါကြောင့်ဒီမှာကျနော်တို့က2နေ့ 2017 ရဲ့အဆုံးမှာရှိပါတယ် #NABShow ။ ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်မမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်မှာဒီမှာသွန်းနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်အဖြစ်အဆိုပါ Show ကိုနှင့်အသံလွှင့်၏ကြည့်ရှုသူအပေါင်းတို့ကိုတက်ရောက်တိုက်ရိုက်ဘလော့ Beat! ငါမနက်ဖြန်လူတိုင်းမြင်နေမျှော်လင့် - အမြဲတမ်း blogged-In နေဖို့သတိရ! အခုတော့ရဲ့သူတို့ကိုပါတီများထိမှန်ပါစေ !!! ပထမဦးစွာ SuperMeet ထ ... (ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာ!)
အယ်ဒီတာ-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, ထုတ်ဝေသူ at ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်း, LLC Beat ။
ရိုင်ယန်တကျိပ်နှစ်ပါး၏ငယ်ရွယ်စဉ်မှာထုတ်လွှင့်နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေစတင်ခဲ့! သူကစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်စာပေအချို့စရာဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားကြီးမားသော post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတည်ဆောက်ခန့်ဆယ်နှစ်အသံအင်ဂျင်နီယာခဲ့, ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရိုင်ယန်ယခင်ကထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာမဂ္ဂဇင်း, ကို Creative နွားမနှင့်သူ၏စီမံကိန်းများကိုအဘို့ရေးထားစာပေများစွာအတွက် featured ပါပြီ။
ရိုင်ယန် Salazar အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Aimée Ricca SMPTE မှာဖြတ်တောက်ခြင်း-Edge Marketing ကိုအလေ့အကျင့်ပျအတှကျအသိအမှတ်ပြု! - ဇွန်လ 8, 2018
NAB: ဒါဟာအားလုံး Started ဘယ်လို ... - မတ်လ 17, 2018
NAB ပြရန်ပါတီများ: 2018 NAB Show ကိုပါတီ & ပြီးနောက်-နာရီပွဲများများစာရင်း - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2018
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2017-04-25
ယခင်: NOORSAT HD ကို Programming များအတွက်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် Telairity encoding ချမှတ်
နောက်တစ်ခု: Paywizard Cisco ရဲ့ Infinite ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "2017 #NABShow - နေ့2အသုတ်စုံ" ။ http://www.broadcastbeat.com/2017-nabshow-day-2-wrap-up/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။